မိန်းကလေးတိုင်း ကြွေကျသွားမယ့် ပန်းရောင်ကမ္ဘာလေး "Girls" Yangon Tea House
မိန်းကလေးတိုင်း ကြွေကျသွားမယ့် ပန်းရောင်ကမ္ဘာလေး “Girls” Yangon Tea House
27 Apr 2018 . 6:11 PM
ကိုယ်တို့မိန်းကလေးတွေဆိုတာ အရွယ်သုံးပါးမရွေး လှလှပပနုနုဖတ်ဖတ်အရောင်လေးတွေ၊ ပစ္စည်းလေးတွေ၊ နေရာလေးတွေဆို သိပ်သဘောကျတဲ့အမျိုးမို့လား? အပြင်သွားရင်းလာရင်းနဲ့လည်း ဆိုင်လှလှလေးတွေ့ရင် ဝင်လိုက်ရမှ၊ ဓါတ်ဖမ်းလိုက်ရမှ ဆိုတာလည်း ကိုယ်တို့မိန်းမသားတွေပါပဲ။
ဒီလိုမိန်းမသားတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့သည်းခြေကြိုက် ပန်းရောင်နုနုလေးတွေနဲ့ တစ်ဆိုင်လုံး ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းနေတဲ့ Ice Tea ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကတော့ အလင်းပြရင် ကြွေသွားမှာ အသေအချာပဲ။
ဆိုင်လေးက အမှတ် ၁၈၊ စဥ့်အိုးတန်းလမ်း အောက်ဘလောက်၊ လသာမြို့နယ်မှာ ရှိပါတယ်။ ကမ်းနားလမ်းဘက်ကဆို ဝင်ဝင်ချင်းပဲ။ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းစာလေးမို့ ကျဉ်းပေမယ့် ကောင်မလေးတိုင်း ရင်ထဲငြိမယ့်ဆိုင်လေးပါ။ ဆိုင်လေးက နွေရာသီအတွက်တော့ တကယ့်နိဗ္မာန်ပဲ။
တစ်ဆိုင်လုံးကို ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့လေးတွေ၊ ပန်းရောင်ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေ၊ ပန်းရောင်လေးတွေချည်း ခြယ်ပြီး ဖမ်းစားထားလို့ ရောက်ပြီးရင် တစ်ဆိုင်လုံး အနှံ့ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်စရာလေး။ ပုံလေးတွေသာ ကြည့်တော့နော်။
ခုံလေးတွေ၊ စားပွဲလေးတွေကအစ ချစ်စရာလေးတွေ။ အဲ့အပြင် မီးလုံးတန်းလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတာများ ကိုရီးယားကကော်ဖီဆိုင်လေး ရောက်နေသလိုပဲ။ Aircon အေးအေးလေးနဲ့ ပန်းရောင်ကမ္ဘာလေးထဲမှာ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းလေး Laptop လေးတစ်လုံးနဲ့ မျောချင်တိုင်းမျောပါလိမ့်။
ဆိုင်လေးမှာ အဓိကရတာက Ice Tea၊ black Tea၊ Juice နဲ့ Soda လေးတွေလောက်ပါပဲ။ စားစရာအနေနဲ့ဆို ဆိုင်လုပ် Chocolate Cookie ကြွပ်ကြွပ်မွမွလေးတွေရှိတယ်။ ဆိုင်လေးကဖွင့်တာ ၂ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတာမို့ ကျန်တာတော့ ဘာမှမရသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်လလောက်ဆို စားသောက်စရာ Menu အသစ်လေးတွေတင်တော့မှာတဲ့။
အရသာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ သောက်လို့ အဆင်ပြေရုံအခြေအနေလောက်ပါပဲ။ နေရာလေးကသာလှတာ Ice Tea တွေက မစွံပါဘူး။ ချောကလက်ကွတ်ကီးအကြွပ်လေးကတော့ စားကောင်းပါတယ်။
ကိုယ်တွေကတော့ Ice Mango Green Tea နဲ့ Ice Milk Tea ၂မျိုးသောက်ခဲ့တယ်။ အရသာကတော့ ပေါ့ပေါ့ပဲ။ Milk Tea ကလည်း တစ်မျိုးတည်းရှိသေးတယ်။ ကြားရသလောက်ကတော့ Home Sweet Home Dessert ဆိုင်လေးကနေ ခွဲထွက်ထားတာတဲ့။
ဈေးနှုန်းလေးတွေကလည်း တစ်ထောင်၊ ထောင့်သုံးရာကနေ နှစ်ထောင်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ ကျောင်းသူလေးတွေလည်း ထိုင်လို့ရတယ်။ ချစ်သူနဲ့ သာသာယာယာဒိတ်လို့လည်း တွက်ချေကိုက်တယ်။
အဓိကက အေးအေးဆေးဆေးလေးမို့ ထိုင်လို့ကောင်းတာလေးရယ်၊ ဆိုင်ရဲ့ ဘယ်နေရာကမဆို ဓါတ်ပုံရိုက်လို့လှတာရယ်ကတော့ တစ်ခါရောက်ပြီးရင် မသိဘူး နေ့တိုင်းသွားမယ် ဖြစ်နေတော့မှာပဲ။
အရသာကောင်းကောင်း စားဖို့ သောက်ဖို့ ဆိုရင်တော့ ဒီဆိုင်လေးကို အကြိုက်တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ နေရာလှလှလေးတွေ သဘောကျပြီး အေးအေးဆေးဆေး Chill ချင်တဲ့သူတွေမှသာ မပြန်ချင်ဖြစ်သွားစေမှာနော်။ နေ့ခင်း ၁၂ နာရီကနေ ည ၁၀ နာရီထိဖွင့်တယ်တဲ့။ လူများလာရင်တော့ ထိုင်လို့မကောင်း၊ ဓါတ်ဖမ်းရင်လည်း ရှက်စရာကြီးမို့ လူရှင်းမယ့် အချိန်လေး မြန်မြန်ပြေးလိုက်ကြရဦးနော်။ ဆိုင်နာမည်လေးက “Girls” ပါတဲ့။
မိနျးကလေးတိုငျး ကွှကေသြှားမယျ့ ပနျးရောငျကမ်ဘာလေး “Girls” Yangon Tea House
ကိုယျတို့မိနျးကလေးတှဆေိုတာ အရှယျသုံးပါးမရှေး လှလှပပနုနုဖတျဖတျအရောငျလေးတှေ၊ ပစ်စညျးလေးတှေ၊ နရောလေးတှဆေို သိပျသဘောကတြဲ့အမြိုးမို့လား? အပွငျသှားရငျးလာရငျးနဲ့လညျး ဆိုငျလှလှလေးတှရေ့ငျ ဝငျလိုကျရမှ၊ ဓါတျဖမျးလိုကျရမှ ဆိုတာလညျး ကိုယျတို့မိနျးမသားတှပေါပဲ။
ဒီလိုမိနျးမသားတှကေို ကိုယျစားပွုတဲ့သညျးခွကွေိုကျ ပနျးရောငျနုနုလေးတှနေဲ့ တဈဆိုငျလုံး ခဈြဖို့ကောငျးလှနျးနတေဲ့ Ice Tea ဆိုငျလေးတဈဆိုငျကတော့ အလငျးပွရငျ ကွှသှေားမှာ အသအေခြာပဲ။
ဆိုငျလေးက အမှတျ ၁၈၊ စဉျ့အိုးတနျးလမျး အောကျဘလောကျ၊ လသာမွို့နယျမှာ ရှိပါတယျ။ ကမျးနားလမျးဘကျကဆို ဝငျဝငျခငျြးပဲ။ တိုကျခနျးတဈခနျးစာလေးမို့ ကဉျြးပမေယျ့ ကောငျမလေးတိုငျး ရငျထဲငွိမယျ့ဆိုငျလေးပါ။ ဆိုငျလေးက နှရောသီအတှကျတော့ တကယျ့နိဗ်မာနျပဲ။
တဈဆိုငျလုံးကို ပနျးရောငျဖြော့ဖြော့လေးတှေ၊ ပနျးရောငျပစ်စညျးသေးသေးလေးတှေ၊ ပနျးရောငျလေးတှခေညျြး ခွယျပွီး ဖမျးစားထားလို့ ရောကျပွီးရငျ တဈဆိုငျလုံး အနှံ့ဓါတျပုံရိုကျခငျြစရာလေး။ ပုံလေးတှသော ကွညျ့တော့နျော။
ခုံလေးတှေ၊ စားပှဲလေးတှကေအစ ခဈြစရာလေးတှေ။ အဲ့အပွငျ မီးလုံးတနျးလေးတှနေဲ့ အလှဆငျထားတာမြား ကိုရီးယားကကျောဖီဆိုငျလေး ရောကျနသေလိုပဲ။ Aircon အေးအေးလေးနဲ့ ပနျးရောငျကမ်ဘာလေးထဲမှာ စာအုပျလေးတဈအုပျ၊ ဒါမှမဟုတျ ဖုနျးလေး Laptop လေးတဈလုံးနဲ့ မြောခငျြတိုငျးမြောပါလိမျ့။
ဆိုငျလေးမှာ အဓိကရတာက Ice Tea၊ black Tea၊ Juice နဲ့ Soda လေးတှလေောကျပါပဲ။ စားစရာအနနေဲ့ဆို ဆိုငျလုပျ Chocolate Cookie ကွှပျကွှပျမှမှလေးတှရှေိတယျ။ ဆိုငျလေးကဖှငျ့တာ ၂ပတျလောကျပဲရှိသေးတာမို့ ကနျြတာတော့ ဘာမှမရသေးဘူး။ ဒါပမေယျ့ နောကျလလောကျဆို စားသောကျစရာ Menu အသဈလေးတှတေငျတော့မှာတဲ့။
အရသာအနနေဲ့ဆိုရငျတော့ သောကျလို့ အဆငျပွရေုံအခွအေနလေောကျပါပဲ။ နရောလေးကသာလှတာ Ice Tea တှကေ မစှံပါဘူး။ ခြောကလကျကှတျကီးအကွှပျလေးကတော့ စားကောငျးပါတယျ။
ကိုယျတှကေတော့ Ice Mango Green Tea နဲ့ Ice Milk Tea ၂မြိုးသောကျခဲ့တယျ။ အရသာကတော့ ပေါ့ပေါ့ပဲ။ Milk Tea ကလညျး တဈမြိုးတညျးရှိသေးတယျ။ ကွားရသလောကျကတော့ Home Sweet Home Dessert ဆိုငျလေးကနေ ခှဲထှကျထားတာတဲ့။
ဈေးနှုနျးလေးတှကေလညျး တဈထောငျ၊ ထောငျ့သုံးရာကနေ နှဈထောငျဝနျးကငျြဆိုတော့ ကြောငျးသူလေးတှလေညျး ထိုငျလို့ရတယျ။ ခဈြသူနဲ့ သာသာယာယာဒိတျလို့လညျး တှကျခကြေိုကျတယျ။
အဓိကက အေးအေးဆေးဆေးလေးမို့ ထိုငျလို့ကောငျးတာလေးရယျ၊ ဆိုငျရဲ့ ဘယျနရောကမဆို ဓါတျပုံရိုကျလို့လှတာရယျကတော့ တဈခါရောကျပွီးရငျ မသိဘူး နတေို့ငျးသှားမယျ ဖွဈနတေော့မှာပဲ။
အရသာကောငျးကောငျး စားဖို့ သောကျဖို့ ဆိုရငျတော့ ဒီဆိုငျလေးကို အကွိုကျတှမှေ့ာမဟုတျပါဘူး။ နရောလှလှလေးတှေ သဘောကပြွီး အေးအေးဆေးဆေး Chill ခငျြတဲ့သူတှမှေသာ မပွနျခငျြဖွဈသှားစမှောနျော။ နခေ့ငျး ၁၂ နာရီကနေ ည ၁၀ နာရီထိဖှငျ့တယျတဲ့။ လူမြားလာရငျတော့ ထိုငျလို့မကောငျး၊ ဓါတျဖမျးရငျလညျး ရှကျစရာကွီးမို့ လူရှငျးမယျ့ အခြိနျလေး မွနျမွနျပွေးလိုကျကွရဦးနျော။ ဆိုငျနာမညျလေးက “Girls” ပါတဲ့။